Hiriira Mormii Oromiyaa Keessaa Irratti Lubbuun Namaa Dhabamuu fi Kaan Madaa’uu tu Dubbatama -
Hiriira Mormii Oromiyaa Keessaa Irratti Lubbuun Namaa Dhabamuu fi Kaan Madaa’uu tu Dubbatama
Godinaa Harargee Lixaa, magaalaa Machaaraa keessa ka jiru, mana-barnootaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti har’a yeroo barattoonni barachuuf mooraa seenanitti, “maaliif Yunifoormii hin uffatiin dhufatan” jechuun, humnoonni mootummaa barattoota haleeluu isaanii dubbatu, barattoonni.
Gama kaaniin Godinaa Horroo-Guduruu Wallaggaa, aangaa Guduruu, magaalaa Kombolchaa keessa ka jiru mana-barnootaa sadarkaa tokkoffaa Kombolchaa irratti boombii har’a darbatameen barattoonni madaa’uu, jiraattonni.
Achuma Godinaa Horroo-Guduruu Wallaggaa, aanaa Jaartee, magaalaa Aliiboo keessatti kaleessa ennaa barattoonni sadarkaa lammaffaa fi qophaa’inaa hiriira mormii ba’anitti kanneen humnoota federaalaa haleelamanii miidhaman barattoota hedduu fi barsiisota sadii keessa, tokko akkuma wal’aansa fayyaaf Hospitaala Xiqur Anbassaa, ka Finfinnee jiru dhaqqabetti du’uu isaa jiraattonnii fi barattoonni Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.
Barsiisaa Addunyaa Irreechaa. Horroo Guduruu Wallaga, magaalaa Aliibootti kan ajjeefame
Akka jiraattonni jedhanitti, Addunyaa Irreessoo ka jedhamu, barsiisaan mana-barnootaa sadarkaa lammaffaa qophaa’inaa Aliiboo reebichaa fi rasaasa mataa isaa haleele irra kan ka’e lubbuu dhabe. Barsiisonni akka hamaatti miidhaman ka biroon lama Hospitaala Shaambuu keessatti wa’aanamaa jira.
Aangawoota magaalaa Aliiboo irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbille iyyuu haga ammaatti nama deebii kennu hin aranne.
Garuu, aanaaa ollaa sana jiru – Amuru, magaalaa Oborraa keessatti, “Maaster Pilaaniin Finfinnee haa haqamu. Barattoonni hidhaman haa hiikaman” jechuun kaleessa mormii kaasuu isaaniitiin, humna mootummaatiin hidhamuu isaanii fi hagi tokko hidhamuu, ka jiraattoonni himataniif, ajajaan poolisii aanaa Amuruu har’a deebii bal’aa kennanii jiran.
Previous Pirez.Oromiyaa:Godinoota Jeequmsi itti ka’etti ummatii jireenna ofiitti deebi’aa jira galatni ka hawaasaafii fi seera eegdotaati
Next ‪#‎OromoProtests‬ Machara ( West Hararge) screaming at the TPLF devil back to hell December 31, 2015